आज २०७८ कार्तिक १५ गते सोमबारको राशिफल - माडी खबर
आज २०७८ कार्तिक १५ गते सोमबारको राशिफल
माडी खबर calendar_today १४ कार्तिक २०७८, 11:55 pm
आज २०७८ कार्तिक १५ गते सोमबारको राशिफल । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-